Beerta Warshadaha - SHANGHAI KAIQUAN PUMP (GROUP) Co., Ltd.
Beerta Warshadaha ee Shanghai
Beerta Warshadaha ee Hefei
Beerta Warshadaha ee Shijiazhuang
Beerta Warshadaha ee Shenyang
Beerta Warshadaha ee Zhejiang
Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co., Ltd. waa mid ka mid ah soo saaraha bamka xirfadeed ee ugu weyn, kuna takhasusay cilmi baarista & nashqadeynta, soosaarka & iibinta bambooyin tayo sare leh, nidaamyada biyo bixinta & nidaamka xakamaynta bamka. Waxay hogaamisaa warshadaha wax soo saarka bamka ee Shiinaha. Wadarta shaqaaluhu waa in ka badan 5000, oo ka kooban in ka badan 80% dadka haysta dibloomada kulliyadda, in ka badan 750 injineero, injineer sare iyo dhakhaatiir. Kooxda KAIQUAN waxay leedahay 5 jardiinooyin warshadeed oo ku yaal Shanghai, Zhejiang, Hebei, Liaoning iyo Anhui oo wadartoodu tahay 7,000,000 mitir murabac.
Sida laga soo xigtay iibka iibka, Shanghai Kaiquan ayaa loo qiimeeyay No.1 15 sano oo isku xigta oo ku saabsan warshadaha bamka Shiinaha iyo 2019 tirada iibka kooxdu waa 850 milyan oo doolar. Iyada oo gacan laga helayo nidaamyada ERP & CRM, KAIQUAN waxay siisaa xalal xirfadlayaal ah dhammaan macaamiisha ku sugan suuqa shisheeyaha. Intaa waxaa dheer, KAIQUAN wuxuu aasaasay shabakad adeeg qaran oo leh 32 shirkado laamo iib ah iyo 361 hay'adood. Soo saarida alaab tartan & kalsooni leh si loogu qanco macaamilka ayaa ah mudnaanta koowaad ee Kaiquan.
Wax soo saarka ugu muhiimsan: Kala saar bamka tuubada, Vertical Mixed flowing pump, Vertical Axial qulqulka bamka, Kuleeliyaha biyaha ku shub biyo kuleylka, Bamka faleebada faleebada biyaha, Gawaarida isku dhafan ee kaladuwan, Bamka kor u qaadida biyaha, Gudiga xakamaynta & nidaamka, Wareega bamka biyaha, Mashiinka Kondensate, dhamaan noocyada bamka loo isticmaalo warshadaha warshad tamarta nukliyeerka.
Cinwaanka: Lambarka 4255, Caoan Road, Degmada Jiading, Shanghai, Shiinaha
(Hefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co., Ltd. wuxuu ahaa soosaaraha ugu xirfada badan ee matoorrada quusin kara iyo bambooyin korantada quusin kara oo leh dowladda qaranka Shiinaha).
Sanadkii 2008, Kaiquan Group waxay iibsadeen Hefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co., Ltd. oo magaceeda loo beddelay Hefei Kaiquan Motor & Electrical Pump Co., Ltd. Waxay ka kooban tahay guud ahaan aagga 270,000 mitir murabac ah & aagga dhismaha oo ah 230,000 mitir murabac oo wax soo saar ah . Xilligan, waxay leedahay in ka badan 1500 oo shaqaale ah oo ay ku jiraan 278 injineer & 56 injineero sare. Halkaan waxaa ku yaal tijaabooyin horumarsan, kormeer iyo qaabeynta matoorrada quusin kara iyo bambooyin.
Waxyaabaha ugu waaweyn: Mashiinka La-quusin karo, Mashiinka La-quusin karo, Mashiinka Bullaacadaha, Mashiinka Dab-demiska, Mashiinka Axial qulqulka qulqulka, Mashiinka Biyaha Qasan ee qulqulka ah, Nidaamka Xirmooyinka Hoosada, Guddi-hawleedka, Kala-bixinta kiiska kala-baxa, Mashiinka hal-mar iyo wixii la mid ah.
Cinwaanka: Lambarka 611, Wadada Tianshui, Degmada Hefei Xinzhan, Magaalada Hefei, Gobolka Anhui, Shiinaha
Shijiazhuang Kaiquan Slurry Pump Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2005 iyadoo wadarta maalgashiga ay gaareyso 20 milyan oo doolar, oo ka kooban guud ahaan aagga 47,000 mitir murabac ah & aagga dhismaha qiyaastii 22,000 mitir murabac ah. Waqtigan xaadirka ah, waxay leedahay khubaro 250 ah, farsamayaqaano sare oo injineernimo iyo shaqaale xirfad leh. Waxaa jira khadka waxsoosaarka cusbada ee horumarsan adduunka iyo isku darka ciidda joogtada ah. Dhammaan jilayaasha waxay qaataan foornada ciida ee phenol waxayna leedahay 2-tan & 1-ton oo foornooyin dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah kuwaas oo tuuri kara 8-tan oo gogo 'alloy single. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay in ka badan 300 nooc oo qalab casri ah.
Waxyaabaha ugu waaweyn: Dhammaan noocyada bamka slurry loo isticmaalo Minging, wax soo saarka Dhuxul, Warshadda Power, wabiga qodaa, Alumina iyo warshadaha kale.
Cinwaanka: Aagga Warshadaha ee degmada ZHENGDING, Gobolka Hebei, Shiinaha
Shenyang Kaiquan Petrochemical Pump Co., Ltd. waa shirkad ay wada leeyihiin iskaashatada KAIQUAN Group oo ka kooban guud ahaan aagga 34,000 mitir murabac & dhismaha aagga oo ah 12,000 mitir murabac ah. Waa 630 xubnood oo shaqaale ah hada oo ay kujiraan 63 injineero sare. Waxaa jira 200 nooc oo mashiinno horumarsan ah sida qalabka mashiinka NC, aaladaha mashiinada baaxada weyn leh, mashiinada dheelitirka xawaaraha sare, aaladaha alxanka tooska ah ee baaritaanka aan burburin karin.
Shengyang Kaiquan waxay leedahay qalab wax soo saar oo dhameystiran & tas-hiilaad imtixaan, shaqaale maamul oo heer sare ah, maareyn adag & abaabul taas oo ku saleysan habraacyada iyo dukumiintiyada nidaamyada caalamiga ah ee IS09001 oo damaanad qaadaya inay siiyaan wax soo saar wanaagsan macaamiisha adduunka.
Waxyaabaha ugu waaweyn: API610 Mashiinka kiimikada ayaa buuxiyo shuruudaha API6107 ANSI B73.1M iyo IS02858
Cinwaanka: Maya. 4, 26th Wadada, Degmada Shenyang ET, magaalada Shenyang, Gobolka Liaoning, Shiinaha
Zhejiang Kaiquan Industrial Park waxaa la aasaasay bishii Sebtember 1968 waxaana loo beddelay Zhejiang Kaiquan Pump Manufacturing Co. Ltd. bishii Maajo 1994. Waxay ka kooban tahay guud ahaan aagga 50,000 mitir murabac & dhismaha aagga 23,678 mitir murabac oo ku yaal Zhejiang. Hadda waxay leedahay 490 xubnood oo shaqaale ah iyo 213 nooc oo qalabka wax lagu farsameeyo & tijaabinta oo leh awood wax soo saar sanadle ah oo ka badan 100,000 nooc oo qiime wax soo saar sanadle ah ay tahay 35 milyan oo doolar.
Waxyaabaha Ugu Muhiimsan: Bamka mashiinka keli ah, Mashiinka gudaha, Bamka nuugista dhamaadka
Cinwaanka: Aagga Warshadaha Bariga Yurub, Degmada Yongjia, Magaalada Wenzhou, Gobolka Zhejiang, Shiinaha